Asian Academy Creative Awards ဆုပေးပွဲလေးကို ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဖက်ရှင်လေးဝတ်ကာ ချစ်ဖေဖေနဲ့အတူ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်…. – Shwewiki.com
Asian Academy Creative Awards ဆုပေးပွဲလေးကို ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဖက်ရှင်လေးဝတ်ကာ ချစ်ဖေဖေနဲ့အတူ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်….
December 7, 2020 By admin Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပန်းရောင်ခြယ်က နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဂရေဟမ်ရဲ့ သမီးကြီးဖြစ်တာကြောင့် မသိသူမရှိလောက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ဖေဖေဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်သူလို့လည်း အများက ချီးကျူးပြောဆိုတာကို ခံရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရေဟမ်နဲ့အတူ သီချင်းတွေကိုလည်း တွဲဖက်သီဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ သီချင်းလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း နားထဲစွဲနေအောင် အသံကောင်းလွန်းသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေ အလှလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအသည်းစွဲချစ်ခင်ရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းရောင်ခြယ်ဟာ အဆိုဘက်တွင်သာမကဘဲ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်ရိုက်ကူးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကြားမှာ ပရိသတ်တွေကြွေခဲ့ရပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုသာမက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် အမြဲဆိုသလိုဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်း ရွှေဝါရောင် ခမ်းနားလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးကိုဆင်မြန်းကာ ချစ်ရတဲ့ ဖေဖေနဲ့အတူ Asian Academy Creative Awards ဆုပေးပွဲလေးကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကိုဖော်ပြခဲ့ရာ သားအဖနှစ်ယောက်လုံး အရမ်းချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ပန္းေရာင္ျခယ္က ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ ဂေရဟမ္ရဲ႕ သမီးႀကီးျဖစ္တာေၾကာင့္ မသိသူမရွိေလာက္ေအာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ေဖေဖျဖစ္သူရဲ႕ ေျခရာကို နင္းႏိုင္သူလို႔လည္း အမ်ားက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုတာကို ခံရသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဂေရဟမ္နဲ႔အတူ သီခ်င္းေတြကိုလည္း တြဲဖက္သီဆိုေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ သီခ်င္းေလးေတြဟာဆိုရင္လည္း နားထဲစြဲေနေအာင္ အသံေကာင္းလြန္းသူေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အသံပါဝါေကာင္းေကာင္းနဲ႔ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ အၿပဳံးေလးေတြ အလွေလးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအသည္းစြဲခ်စ္ခင္ရသူေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းေရာင္ျခယ္ဟာ အဆိုဘက္တြင္သာမကဘဲ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္႐ိုက္ကူးေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံးေလးေတြၾကားမွာ ပရိသတ္ေတြေႂကြခဲ့ရၿပီး မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုသာမက ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကို ရရွိေနသူေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္ေလးေတြကိုလည္း ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အၿမဲဆိုသလိုေဖာ္ျပေလ့ရွိတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။လတ္တေလာမွာလည္း ေ႐ႊဝါေရာင္ ခမ္းနားလြန္းတဲ့ ဖက္ရွင္ေလးကိုဆင္ျမန္းကာ ခ်စ္ရတဲ့ ေဖေဖနဲ႔အတူ Asian Academy Creative Awards ဆုေပးပြဲေလးကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြကိုေဖာ္ျပခဲ့ရာ သားအဖႏွစ္ေယာက္လုံး အရမ္းခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနတာေၾကာင့္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ ။
ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္။
ကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာရတဲ့အပြင် အိမ်ကိစ္စတွေကိုပါ တစ်ယောက်တည်းလုပ်နေရလို့ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီဆိုတဲ့ ခင်သဇင်…
ယောကျာ်းလေးဆန်ဆန်နေခဲ့တဲ့သူမရဲ့ကလေးဘဝကပုံလေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ တက်သစ်စ အဆိုတော်မလေး G…